Bilayska Muqdisho oo xalay qabtay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa iyo dadkii saarnaa haatanna wali la baarayo. – Radio Daljir
Muqdisho, Nov 16 ? Ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho ayaa xalay gacanta ku dhigay baabuur nooca baska loo yaqaan ah kaasoo lagu soo raray qaraxyo miino, iyadoo sidoo kalena la qabqabtay dadkii saarnaa baabuurkaasi oo ka badnaa 10 ruux.
Qabashada baabuurkaan ayaa timid kaddib markii ciidamada amniga xalay xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen hawlgallo ballaaran oo lagu tilmaamay in ay ahaayeen xaqiijinta amniga degmooyinka gobolka Banaadir.
Taliyaha ciidamada Bilayska gobolka Banaadir Col. Axmed Xasan Maallin oo war-baahinta u sharraxay sidii ay ku soo qabteen baabuurkaasi ayaa sheegay ciidamadu in ay ka war-heleen gaariga saacado badan ka hor inta aan la qaban waa sida uu hadalka u dhigaye, waxaana uu intaasi raaciyey baabuurkaasi in uu ka yimid dhinaca deegaanka Ceelasha biyaha.
Taliyuhu, waxaa uu xusay ciidanka in ay u suuragashay dhammaanba dadkii baabuurkaasi saarnaa oo ka badnaa 10 ruux iyo agabkii uu siday oo ahaa waxyaahaba qaraxa in ay gacanta ku hayaan, lagu wado baaritaanno lagu ogaanayo habkii iyo halkii laga soo abaabulay, inkastoo warar kuwaasi ka madax-bannaana ay sheegeen qayb ahaan dadkii baabuurkaasi saarnaa in ay baxsadeen.
Dhinaca kale xalay magaalada Muqdisho meelo ka mid ah waxaa ka dhacay iska-hor-imaaddo goos-goos ah kuwaasi oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda iyo kuwa Al-shabaab, waxaana dhinaca kale la tilmaamayaa in ay jireen weeraro bambaano fariisimo ka mid ah degmooyinka Banaadir lagu qaaday dhaliyeyna khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan wali la xaqiijin karin tirada rasmiga ah.